Automation-ka Habka Caqliga leh: Faa'iidooyinka, Caqabadaha, iyo Codsiyada - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
Automation-ka Habka Caqliga leh: Faa'iidooyinka, Caqabadaha, iyo Codsiyada
Indheer-garadnimada Habraaca Automation-ka (IPA) waa dhinac kale oo tignoolajiyada ah oo waddada u xaartay hal-abuuro badan oo cusub. Habka otomaatiga ah wuxuu magaciisu ka bilaabmay baabuurta bilaa darawalka ah ilaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Automation-ka ayaa lagu daray baalal badan oo tignoolajiyadeed si loo abuuro loogana faa'iidaysto noocyada garaadka cusub. Maqaalkani waxa uu ka hadlayaa dhinac kasta oo muhiim ah oo IPA ah oo aan ku bilowno qeexida iyo ujeedada IPA.
Waa maxay Automation-ka Habka Caqliga leh?
Intelligent Process Automation (IPA) waa isugaynta teknoolojiyadda kala duwan sida Habraaca Automation-ka Dijital ah (DPA), Qalabaynta Robotic Automation (RPA), iyo Sirdoonka Artificial (AI) - loo isticmaalo automation-ka go'aan weyn, hababka ganacsiga dhamaadka-ila-dhamaadka u baahan faragelinta aadanaha ee fulinta.
Hab-socodka Dijital ah Automation-ku waxa uu siinayaa firfircoonida iyo aragtida loo baahan yahay si ay awood ugu siiso hab dhammaystiran oo otomaatig ah hababka ganacsiga. Tani waxay kuu sahlaysaa inaad xakamayso socodka xogta shirkadaada oo dhan waxayna ka dhigaysaa mid fudud in la ogaado inay u baahan tahay horumar iyo isbedel firfircoon.
Dhanka kale, isticmaalka Qalabaynta Robotic Automation Adeegyadu waxay kordhiyaan hufnaanta waxayna dedejiyaan wax kasta oo geedi socodku yahay. Isticmaalka bots-ka software-ka ee u ekaysiiya hawlaha bani-aadmiga waxay gacan ka geystaan ​​baabi'inta aadka u xoog badan iyo hawlaha gacanta sida ka wareejinta xogta hal nidaam una wareejiso mid kale.
Dhanka kale, Sirdoonka Artificial waxay siisaa sirdoon wanaagsan iyo go'aamo isku dhafka RPA iyo DPA. Sida Sirdoonka Artificial wuxuu aqoonsan karaa qaababka xogta, wuxuu sameeyaa go'aanno caqli-gal ah oo wanaagsan isagoo wax ka baranaya wixii hore, oo u qiimeeya xogta qaab aysan shaqaalaha gacan-ku-hawlgalayaasha ah aysan awoodin, waxay soo saartaa heer fekereed oo ka duwan automation-ka.
Adigoo isku xiraya xalal teknoloji oo hufan sida RPA iyo DPA AI, waxaad qaadaneysaa hab istiraatijiyadeed oo aad otomaatig u tahay kaliya maahan hawlaha laakiin sidoo kale dhammaan geeddi-socodka ganacsiga oo dhan.
Hadafka ugu weyn ee Nidaamka Automation-ka Sirdoonka (IPA) waa in loo oggolaado ururada inay farsameeyaan hababka ku lug leh waxyaabo aan dhisnayn sida qoraalka iyo sawirrada. Tan waxaa la sameeyaa iyada oo aan loo baahnayn go'aan gaarista qaanuunka ku salaysan ee xogta tababarka ballaaran ee 95% shirkadaha aysan gaari karin. Marka la soo koobo, ujeedada kama dambaysta ah ee IPA waa in la yareeyo tirada hawlaha ay qabtaan hawlwadeennada gacanta kuwaas oo looga baahan yahay horumarinta wax soo saarka guud iyo waxtarka.
Faa'iidooyinka iyo caqabadaha Automation-ka Habka Caqliga leh
Dhinaca wanaagsan ee Habka Automation-ka Sirdoonka waxa loo kala saaray faa'iidooyinkeeda. Waa kuwan qaar ka mid ah faa'iidooyinka IPA iyo jawaabta su'aasha Maxay tahay IPA?
Isku dhafka bini'aadamka iyo bots - IPA waxay maareyn kartaa oo isku dubaridi kartaa shaqada bots, nidaamyada, iyo shaqaalaha gacanta si hufan. Haddi hadafku yahay xal ganacsi oo dhan markaa is dhexgalka tignoolajiyada ugu casrisan ayaa ah xalka kaliya.
Ka xoree shaqaalaha hawlaha caajiska ah - Ka xoraynta shaqaalaha gacanta ee soo noqnoqda, hawlaha caadiga ah waxay u ogolaataa inay diiradda saaraan hawlaha u baahan hal-abuurka iyo faragelinta aadanaha. Waxaa intaa dheer, qaybta go'aan qaadashada waxaa fududayn kara IPA sababtoo ah AI had iyo jeer waxay la shaqeysaa go'aamo xog ogaal ah.
Iska yaree khataraha oo awood u yeelo maamul habboon - Marka aadanuhu shaqaynayo, fursadaha khaladaadku waa sarreeyaa waana lidka tooska ah ee waxa otomaatiggu sameeyo. Waxay yaraynaysaa khaladaadka ka muuqan kara hawlo kala duwan sida gelitaanka xogta. IPA waxay sidoo kale xaqiijinaysaa in nidaam kasta la dhamaystiri doono xitaa haddii shaqaaluhu ka leexdo heerarka ururka.
Waxay xaqiijisaa aragtida iyo safarka macmiilka oo siman - Aad bay u adagtahay in la helo natiijooyin ganacsi oo dhan iyadoo la adeegsanayo tignoolajiyada Automation Shakhsi ahaaneed. Waxaad arki kartaa habka oo dhan iyadoo la kaashanayo IPA, taasoo kaa caawineysa inaad aqoonsato caqabadaha ama qodobbada ka dhigi kara safarka macaamiisha mid sahlan oo fudud.
Waxay dardargelisaa geeddi-socodyada – IPA waxay kuu fududaynaysaa oo keliya inaad isbeddel firfircoon ku samayso geeddi-socodka iyo tignoolajiyada iyaga kaalmeeya, laakiin sidoo kale inaad dedejiso hab-socodka dhammaadka-ilaa-dhamaadka. Tani waxay u oggolaanaysaa ururrada inay kor u qaadaan hanaankooda ganacsi si joogto ah.
Faa'iidooyinka IPA waa ballaaran yihiin laakiin waxaa jira caqabado sidoo kale. Aynu si degdeg ah u qaadanno caqabadahaas.
Maqnaanshaha shaqaale aad u casrisan oo xirfad leh.
Waxaa ku adkaata kor u qaadida shaqaalaha iyo siinta tababarada saxda ah.
Khilaafyada dhanka shaqaalaha gacanta ku haya iyo wax qabad la'aanta sida saxda ah loola macaamilo.
Kor u kaca tirada khatarta amniga internetka.
Ku adkaanta ka faa'iidaysiga hababka dhaqanka/dhaxalka.
Codsiyada Automation-ka Habka Caqliga leh ee warshadaha kala duwan
Ka faa'iidaysiga IPA ee warshadaha kala duwan ayaa gacan ka gaystay kobaca iyo kor u kaca waxtarka ururada. Qaar ka mid ah isticmaal kiisaska ama codsiyada Automation-ka Habka Sirdoonka tignoolajiyada ayaa hoos ku taxan:
Shirkadaha dawooyinka iyo soosaarayaasha qalabka caafimaadka ayaa si isa soo taraya u isticmaalaya xogta ay bixiso IPA si loo yareeyo khaladaadka iyo khiyaanada iyada oo la wanaajinayo amniga iyo saxnaanta. Warshadaha daryeelka caafimaadku waxay caan ku yihiin dhibka waraaqaha ay soo saaraan. Isticmaalka IPA waxaa loo isticmaali karaa habab kala duwan sida ogolaanshaha, ka saarida, ballamaha shaqaalaha, biilasha, natiijooyinka imtixaanka, iyo qaar kaloo badan.
2. Adeegyada maaliyadeed
IPA mar horeba waa la tijaabiyay waxaana la caddeeyey inay ku hufan tahay qaybta adeegyada maaliyadeed si loo kordhiyo moodooyinka deymaha ee saxda ah si loo xoojiyo hababka amaahda, loo ogaado doorbidka macmiilka iyo dareenka iyo kor u qaadida fulinta ganacsiga iyo jiheynta. Caawinta gudaha Isbadal digital ah Hawlaha ganacsiga ee ugu sarreeya iyadoo la toosinayo hababka qiimaynta, codsiyada amaahda, hawlgallada lacag bixinta akoonnada, iyo xeerarka ganacsiga ayaa ah qaar ka mid ah fursadaha jira Qalabaynta caqliga leh aduunka dhaqaalaha. Sida xaqiiqda ah, 20-25% kharashka waxaa badbaadin kara shirkadaha maaliyadda ee isticmaala otomaatiga caqliga leh.
Chatbots leh NLP (Luqad Dhaqameed Natural) waxaa si firfircoon loogu isticmaalaa shirkadaha caymiska si ay u habeeyaan oo kor loogu qaado khibradaha macaamiisha. Gaar ahaan, waxay ku shaqeeyaan qaab-dhismeedka Nidaamka Sirdoonka Automation-ka si otomaatig ah jadwalka ballanta iyo inay isticmaalaan qaabka is-adeegga si ay ugu fududaato macaamiisha inay doortaan siyaasadda caymiska.
Codsiga IPA ee warshadaha dhismaha waxa ay awood u siinaysaa ururada in ay si fog ula tacaalaan mashiinada iskood isu xilqaamay, automation ee qaansheegyada, dukumentiyada, iyo maaraynta qiyaasaha, oo ay isticmaalaan VR (Xaqiiqda Virtual) tababarka iyo qorsheynta mashruuca.
IPA kaliya uma ogola in wax soo saarka ay otomaatig ka dhigaan wax soo saarka iyo socodka shaqada laakiin sidoo kale waxay taageertaa amarada, iibsiga, alaabada, iyo keenista alaabta sidoo kale.
6. Saliida iyo gaaska
Automation of falanqaynta xogta, abuurista warbixin toos ah, hubinta amniga, maareynta silsiladaha sahayda, iwm. ayaa u sahlaysa warshadaha saliidda iyo gaaska inay kor u qaadaan hufnaantooda shaqo.
7. Warshadaha tafaariiqda
Habraaca garaadka Automation-ka ee warshadaha tafaariiqda waxa uu ogolaadaa automation-ka waaxyo iyo habab kala duwan oo ay ku jiraan ilaha aadanaha hababka, falanqaynta iibka, habaynta soo celinta, iyo qaar kaloo badan.
Hadda waxaan haynaa fikrad ku saabsan sida IPA loogu dabaqi karo waaxyo kala duwan ujeeddooyin tiro badan. Si tartiib tartiib ah shaqaalaha ururkaagu waxay awood u yeelan doonaan inay si fudud ula qabsadaan farsamada oo ay kaa caawiyaan inaad si hufan oo waxtar leh u shaqeyso. Waxaa jira caqabado sidoo kale waana wax caadi u ah hal-abuur kasta oo cusub, laakiin faa'iidooyinka shaqaalaynta Automation Sirdoonka ka miisaan culus caqabadahaas dhamaadka maalinta.